China Middle-hukuru 8 MaZinga Anopisa Mhepo Anofefetera Kutengesa Muchina W-F840-LF-C W-F840-LF Mugadziri neMutengesi | WiresSMT
Wold Soldering Machine
SMT Sarudza & Nzvimbo Machine
LED Tora & Nzvimbo Machine
Yakashandiswa SMT Machine
Solder Pasisa Printa Muchina
SMT Spare Zvikamu
Yepakati nepakati 8 Zoni Huru Kupisa Mhepo Inofefetera Kutengesa Muchina W-F840-LF-C W-F840-LF
Iyo yose miviri-yakagadziriswazve inogadzirisa yakakura-pojekiti jet tekinoroji inovimbisa yunifomu tembiricha muvheni, yakanaka anisotropy mudunhu rega rega rekushisa, uye bhodhi kumusoro haigadziri nzvimbo dzisina moto nekuda kwekudziya kana kwaipisa, uye kusaburitsa mimvuri.
1. Iyo yakasarudzika yepamusoro yehupenyu hwakareba yakagadzirirwa kudziya system.
2. Smooth uye yakavimbika nzira yekutumira.
3. Yakasimba uye yakavimbika system yekudzivirira magetsi.
• Iyo mbiri-musana kugadziriswazve supercharging yekumusoro-nzvimbo jet tekinoroji inoisa yunifomu tembiricha muvheni, yakanaka anisotropy mudunhu rega rega rekushisa, uye bhodhi kumusoro haigadziri nzvimbo dzisina moto nekuda kwekudziya kana kwaipisa, uye kusingabudisi mimvuri. .
• Yepasirese inovandudza kutonhora kushanda. Kukurumidza uye kurongeka kwemafuta ekubhadharisa mashandiro emhando yepamusoro, akakodzera kutapira kwakakwana kwezvinhu zvakaita sebhodhi mamaboard uye mafoni efoni emabhodhi, akadai seBGA, CSP, QFP uye multilayer redunhu mabhodhi. Iko hakuna tembiricha yekushisa mukati mega yega yepedo tembiricha.
• Inosimudza uye yakadzika yakazvimiririra yekudziya module, yakazvimirira inopisa mhepo kutenderera, kaviri kutetepa nzvimbo kana katatu ye welding zone.
• Yese tembiricha yekudziya inotora modular dhizaini, tembiricha yepamusoro inodzivirira refu shaft inopisa mweya mota uye yakakura simba nickel chromium yekudziya waya zviri nyore kuchengetedza uye kugadzirisa.
• 400MM mesh bhandi mhando, isina nhanho inomhanya inomhanya inomhanya frequency kudzora kumhanya.
3.Cooling uye Kutengesa Flux Kudzorera System
• Iyo yakamanikidzwa kutonhora sisitimu inotora zvikamu zviviri zvekumanikidzwa kwemhepo kutonhora tembiricha zone kuti isangane neyekutungamira-yakasununguka maitiro; iyo inotonhorera curve inotsvedza, hapana kamwe kamwe shanduko, kupisa kwakazara kuchinjana, uye iyo yekutonhora yakanyanya inogona kusvika -5 ℃ / S.
• Hapana dhizaini dhizaini, iri nyore kuchenesa.
• Iyo yekushandisa inoshandisa Mitsubishi PLC, iyo yepamusoro komputa inoshandisa Lenovo komputa, ine Windows XP inoshanda system uye 17-inch LCD kuratidza, yakagadzikana uye yakavimbika.
• Iyo inodzora software ine simba, ine inoshanduka muitiro paramende kudzora uye tembiricha tembiricha bvunzo mabasa. Iyo Chinese neChirungu mashandiro ekushandisa anogona kuchinjwa chero nguva.
• Kushandisa WOGO terminals; zvese zvemagetsi zvigadzirwa zvinotengeswa kunze kwenyika, uye mitsara yese yemasaini inochengetedza.
• Kuzvigadzirira wega module yekudziya, otomatiki muripo weiyo inotonhorera jende, kudziya kwekupisa mukati me ℃ 1 ℃.
Kupisa zvikamu Parameter
Nhamba yenzvimbo Dzekushisa
Up 8 + Pazasi 8
Kureba kwenzvimbo dzekupisa
Pamusoro: Mhepo inopisa; Pazasi: Mhepo inopisa
(Yakamanikidzwa convection yemhepo inopisa, Taiwan SAYA mota)
Nhamba yeNzvimbo dzinotonhora
2 Plasma DC Fan
Conveyor Zvikamu Parameter
400mm （isina simbi yesimbi mesh bhandi）
880 ± 20mm
Conveyor Speed ​​Range
0-2200mm / min
Kudzora Zvikamu Parameter
5 Wire, 3 Phase, 380V 50 / 60Hz
Approx 15-20 mins
Temp. Kuisa Range
Kamuri Yegumi.— 380 ℃
Tembiricha Kudzora Nzira
Tembiricha Musiyano Pakati Pakatarisana Nzvimbo
70 ℃, inogona kuenderana nemiyero yepamusoro yekutungamira-yemahara maitiro.
Kupisa Kudzora Precision
Kupisa Kutendeuka pane PCB
Kupisa kwakanyanya （kwakanyanya kana kuderera kwazvo mushure mekuchengetedza tembiricha nguva dzese
Kupimirwa (L * W * H) mm
4250 * 760 * 1450MM
Yepfuura: Ehupfumi Inotungamira-isina-Wakapetwa-maviri Soldering System W-250DS-LF Wave Soldering Machine
Inotevera: Multi-inoshanda SMT Sarudza uye Nzvimbo Machine HCT-800SSTTosimudza pamusoro Mount muchina
Diy Reflow Soldering Machine
Kupisa Mhepo Reflow Soldering Machine
Kutungamirwa Reflow Soldering Machine
Nyora zvako meseji apa uye utumire kwatiri
JUKI Yakakwira-kumhanya Modular Mounter FX-3RAL Inoshandiswa SM ...
SMT Kuteedzera Samsung Kuteedzera SMT Spare Zvikamu
Yakakwirira-kumhanya LED Lens Mounter HCT-V8 otomatiki Le ...
Diki-rakakura Kutungamira-kusununguka Reflow Oven W-F530 W-F830 ...
Standard Semi-otomatiki Solder Pasika Printer W -...
Ehupfumi Inotungamira-isina-Wakapetana-Wega Soldering System ...
nezvedu kutengesa network tisangane nesu mabasa